एक युवकको त्यो किसले अर्बपति बनिन् काइली ? - ramechhapkhabar.com
एक युवकको त्यो किसले अर्बपति बनिन् काइली ?
अमेरिकी रियालिटी टिभी स्टार तथा अर्बपति काइली जेनर विश्वभरी चर्चित छन् । काइलीले निकै कम उमेरमा निकै ठूलो व्यवसायिक साम्राज्य खडा गरिसकेकी छिन् । उनले १९ वर्षको उमेरमा काइली लिप किट नामबाट आफ्नो लिपस्टिक लाइन सुरु गरेकी थिइन् । पछि यो कस्मेटिक लाइनको नाम बदलेर काइली कस्मेटिक राखियो । यो व्यवसाय निकै सफल रह्यो र काइली सबैभन्दा कम उमेरमा अर्बपति बन्ने व्यक्ति बनिन् ।